Poulet pané - Recette de cuisine malagasy de Madagascar
Poulet pané à la façon malagasy
par Gaël RAKOTOVAO	 25 mai 2016
Poulet pané: anisan’ny sakafo tsotra sy mora nefa tena ankafizin’ny maro izy ity. azo atao nature na mariné ka araka izay hitiavana azy ny marinade. Ohatra ny fampiasana condiments toy ny ail, gingembre, epices, sauces na koa herbes toy ny thym, romarin, sns.
Fotoana ikarakarana azy: 15 mn + temps d’attente de 30mn.
Sel, poivre, gingembre, ail,
Fikarakarana poulet pané
Tetehina fisapisaka ny nofon’akoho, asiana sel sy poivre sy gingembre sy sauce soja sy ail ary avela hilona 30mn.
Kapohana ny atody, tsy asiana sel fa sauce soja kely.
Ampandalovina vovoka farine manify tsirairay ny nofon’akoho, avy eo ampandalovina ilay atody voakapoka ary farany ampandalovina chapelure.
Afanaina tsy mamay be ny menaka dia endasina mandra-paha doré tsara ny akoho.
recette poulet pané croustillant
Sady ho fanitsiana no fampianarana. maro no miantso azy ity hoe Croquette de Poulet, fa ny croquette dia mixer-na mihitsy ny akoho ary afangaro ireo epices dia volavolaina izay vao asiana panure.
Tsy voatery ho poulet de chair no ampiasaina eto fa raha akoho gasy vatombatony mety ihany fa raha ilay efa tena lehibe mety ho mafy hena be.
laoka malagasy, poulet pané maison recette, poulet pané recette, recette poulet pané chapelure, recette poulet pané croustillant
Article précédent : Ovy sy atody
Ravitoto sy voanjoArticle suivant :